Ahoana ny fomba ahazoana ny rindrankajy mahazatra?
Mety efa nandre ny lahatsoratra teo aloha momba ny dikan'ny fananganana rohy ho an'ny tranonkala fanatsarana. Hevi-dehibe ho an'ny SEO ny backlinks noho ny isan'ireo fotodrafitr'asa isan-karazany - manatsara ny fahitana ny tranokalan'ny pejy valin'ny fikarohana; Manangana sehatry ny tranonkala eo imason'izy ireo Google; Manangana fitohanan'ny fifamoivoizana amin'ny tranonkala iray izy ireo, ary mampitombo ny laza laza. Noho izany, raha te-hamorona profil-rohy matanjaka ianao mba hampitombo ny fifamoivoizana findramam-pikarohanao, mila paikady goavana tsara ho anao izay miasa ho anao.
Andeha isika hiteny vitsivitsy momba ny andraikitry ny backlinks amin'ny paikady fanatsarana. Backlinks dia hevitra tsotra - raha misy tranonkala mifandraika aminao, ilay rohy ivelany dia heverina ho toy ny backlink. Ny anjara andraikitra mavesa-danja amin'ny fananganana rohy dia manatsara endrika loharanom-borona ahatongavan'ny rohy iray. Ny fitaovam-panadiovana dia manombana ny kalitaon'ny backlink amin'ny isan'ireo fepetra manokana izay ahitana ny fahefana avy amin'ny sehatra, ny isa ary ny kalitaon'ny rohy ivelany izay manondro an'io sehatra io, ny maha-zava-dehibe ny votoaty amin'ny loharanon-tranonkala mifandraika sy ny sisa. Raha toa ka mampiseho vokatra tsara avokoa ireo fepetra rehetra ireo, ny loharanon'ny tranonkala dia hahazo ny laharana ambony.
Ny loham-pivarotana isan-karazany dia manome siramamy maromaro mifototra amin'ny laza, tantara ary fahefana ananany amin'ny tsenan'ny sasantsasany. Noho izany, ny rindran-tsavily avy amin'ny loharanom-baovao avo 9 na 10 avo lenta kokoa dia midadasika kokoa noho ny mombamomba ny tranonkala spammy izay tsy manana ny sandan'ny mpampiasa.
Amin'izany rehetra izany, raha te-hizaka amin'ny pejy Google finday ianao, dia mila mahazo lisitra mahazatra sy kalitao avy amin'ny tranokalan'ny PR.
Hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity ny fomba maro samihafa amin'ny fomba hahazoana mora foana ny lamandy. Antenaike ireo teknika ireo dia hanampy anao hametraka ny tranokalanao amin'ny teny fikarohana. Noho izany, andeha isika hijery akaiky ireo teknolojia fananganana rohy.
Amin'ny fanoratana ny mari-boninahitra fanamarinana, dia mahazo anao fotoana ahafahana manatsotra ny mombamomba ny backlink miaraka amin'ny backlinks mahazatra avy amin'ny tranonkala manerantany. Isaky ny mividy vokatra na serivisy izay mendrika ny karamanao ianao dia afaka mamela fijoroana vavolombelona momba ny vendor-tranonkala. Ny fijoroana vavolombelona dia matetika manana rohy ao amin'ny tranokalanao ao anatin'izy ireo mba hanaporofoana fa ny fijoroana vavolombelona dia zavamaniry ara-boajanahary. Izany dia hanampy anao hahazoana rindran-tsaka mora eny amin'ny tranokinao nefa tsy mandany vola. Raha mametraka rohy nofollow amin'ny fijoroanao ho vavolombelona izy ireo, dia azonao atao ny mangataka azy ireo hanova izany amin'ny rohy mivantana amin'ny dofollow.
Afaka mahita loharano RSS maro manerana ny tranonkala izay ahafahan'ireo mpampiasa mijery bilaogy, forums na loharanon-tranonkala samihafa amin'ny lohahevitra samihafa. Fotoana tsara indrindra ho an'ny tranonkala rehetra ahafahana miverina malalaka fichier iray amin'ny dofollow iray amin'ny iray amin'ireo tatitra mahazatra ireo. Ny zavatra rehetra ilainao dia ny manolotra ny fepetra RSS ho an'ireny tatitra ireny. Azonao atao ny manatanteraka izany, na automatique. Raha te-hanao izany ianao dia afaka mampiasa programa antsoina hoe Fast RSS Submitter. Ity programa ity dia hanampy anao handefa ny sehatra an-tariby ho an'ny rohy 100 maneran-tany, mamonjy fotoana sy ezaka maro Source .